सुनको मूल्य आकासिएपछि सर्वसाधारणले किन्ने भन्दा भाउ बढेको भन्दै गहना बिक्री गर्न थाले ! – Life Nepali
सुनको मूल्य आकासिएपछि सर्वसाधारणले किन्ने भन्दा भाउ बढेको भन्दै गहना बिक्री गर्न थाले !
इकोनोमिक्स टाइम्सले पनि पछिल्लो सात वर्षमा सुनको मूल्यमा अहिलेसम्मकै उच्च वृद्धि भएको जनाएको छ । मध्यपूर्वी क्षेत्रमा देखिएको तनावका कारण सुरक्षित लगानी ठानिएको सुनमा अत्यधिक आकर्षण बढेको छ । विश्वबजारमा आज सुनको मूल्य प्रतिऔँस एक हजार ५७३.५० अमेरिकी डलर पुगेको छ । भारतीय बजारमा छापावाला सुनको मूल्य प्रति १० ग्राम ४० हजार १० भारु र तेजाबी सुन प्रति १० ग्राम ३८ हजार १०० भारु तोकिएको छ ।
Previous अब नेपालमा एटीएमबाट दैनिक १ लाख झिक्न पाइने
Next सुदूरपश्चिममा १६ वटा थोत्रा ट्रक रंगरोगन गरी एम्बुलेन्स भनेर बाँडियो “आर्थिक अनियमिता भएको आसन्खा!